Isikhathi seCambrian: izici, i-geology, isimo sezulu, izimbali nezilwane | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Esikhathini se-Paleozoic sinezikhathi eziningana lapho i- isikhathi sokuma komhlaba. Isigaba sokuqala ngesika- ICambrian. Kuhlukaniswa kwesilinganiso sesikhathi sokuma komhlaba kanye nesikhathi sokuqala sezikhathi eziyisithupha zenkathi yePaleozoic. Kwaqala cishe eminyakeni eyizigidi ezingama-541 edlule futhi kwaphela cishe eminyakeni eyizigidi ezingama-485 edlule. Isikhathi esilandelayo yi-Ordovician.
Kulesi sihloko sizogxila kuzo zonke izici, i-geology, isimo sezulu, izitshalo nezilwane zenkathi yeCambrian.
2 Isikhathi seCambrian geology
3 Isimo sezulu seCambrian
4 Ukuqhuma kwempilo
Lesi sikhathi somqondo wePaleozoic sihamba phambili ngokuba umthelela omkhulu ezingeni lokwakheka komhlaba kuyo yonke iplanethi. ICambrian kubhekwe ukuthi ithathe iminyaka eyizigidi ezingama-70 kuphela, kepha isayensi ikwazile ukuyilungisa ngenxa yolwazi oluqoshwe embikweni wezinsalela. Igatsha le-geology eligxile kulezi zinguquko ezitholwa yiplanethi yomhlaba selokhu yakhiwa yi i-geology yomlando.
Sonke lesi sikhathi sithola igama leCambrian egameni elivela eCambria. Leli gama liyindlela yesiLatin yeCymru okusho ukuthi iWales. I-Wales namuhla lapho kutholakala khona izinsalela zokuqala zokwakheka komhlaba kule nkathi. Ngalesi sigaba sokuma komhlaba kukhona ukuqhuma okukhulu kokuphila okokuqala okurekhodwe kumafosili. Izakhi zokuqala ezinamaseli amaningi zingahlukaniswa eziyinkimbinkimbi kunezipanji noma i-jellyfish.
Phakathi kwezidalwa ezibaluleke kakhulu kulesi sikhathi kukhona ulwelwe oluhlaza olungamamilimitha ambalwa nje ububanzi ngenxa yama-trilobites. Lawa ma-trilobite ayiqembu elidumile lama-arthropods abekwazi ukusinda ekuqothulweni okukhulu okukhulu. Lokhu kuvela kwempilo kubizwa ngokuthi ukuqhuma kweCambrian futhi bekungomunye wemicimbi emikhulu ebiphawula umngcele ophakathi kwenkathi yeNeoproterozoic nesikhathi seCambrian.
Isikhathi seCambrian geology
Ngalesi sikhathi kucatshangwa ukuthi amazwekazi ayengumphumela wokuqhekeka kwendawo enkulu yezwe eyayivele ikhona i-Neoproterozoic futhi leyo yayibizwa ngePannotia. Ucezu olukhulu lwezwekazi elikhulu iGondwana futhi luseningizimu kanye namazwekazi amancane ama-3 abizwa ngeLaurentia, iSiberia neBaltic. Lawa mazwekazi ayehambela enyakatho ngenxa yokuhamba kwe Amapuleti eTectonic eziqhutshwa imibukiso ye-convection yengubo yomhlaba.
Le yindlela ukuhamba kwamazwekazi kwaqala ngayo ukwakha izikhundla esizaziyo namuhla. Amanani wokukhukhuka kwezwekazi esikhathini seCambrian alinganiselwa ukuthi abe phezulu ngokungajwayelekile uma kuqhathaniswa nezikhathi ezedlule. Lokhu kusho ukuthi kube nomsebenzi omkhulu wamacwecwe ama-tectonic. Ngenxa yalokhu kuhamba kwamazwekazi, bekungakwazi ukwengeza ukuhlukahluka kwemvelo ezingeni leplanethi selokhu kwakhiwa imvelo eyahlukahlukene enezici ezahlukahlukene.
Ulwandle iPanthalassa yilo olumboze iningi lomhlaba wonke, ngenkathi ezinye izilwandle ezincane ezinjenge-proto-Tethys nolwandle lwaseKhanty zitholakala phakathi kwamanzi wamazwekazi amancane abizwa ngeLaurentia neBaltic.
Isimo sezulu seCambrian
Isimo sezulu senkathi yeCambrian kukholakala ukuthi besifudumele kakhulu kunezikhathi zangaphambilini. Ngalesi sikhathi kwakungekho minyaka yobudala beqhwa emapalini. Okusho ukuthi, akukho sigxobo somhlaba esasimbozwe yiqhwa. Ngokulandelayo, isikhathi seCambrian sehlukaniswe izikhathi: I-Lower Cambrian, i-Middle Cambrian ne-Upper Cambrian. Sizohlaziya isimo sezulu kanye nokwakheka komhlaba kafushane enkathini ngayinye yalesi sikhathi.
I-Lower Cambrian: Ngalesi sikhathi izwekazi laseGondwana kanye nabanye abantu abancane bahlala kuzo zonke izindawo ezisenkabazwe. Lokhu kwaziwa ngenxa yamarekhodi amadiphozithi e-limestone olwandle oluningi nase-epicontinental eshisayo. Ngaleso sikhathi, i-orogeny yeCadomian yiyo eyaholela ezinkathini zokuvela kwenqwaba yomhlaba omkhulu ekuqaleni kweCambrian.
I-Middle Cambrian: ngalesi sikhathi kwakukhona umjikelezo oweqisayo owaphazanyiswa yimidumba emibili ehlehlayo.
I-Cambrian Ephezulu: ingxenye enkulu yezwekazi laseGondwana, elalinezikhundla ezingaphezulu kwezinkabazwe, lalibhekisa ezindaweni ezingamakhaza kakhulu. Bebebuyiselwa ezikhundleni njengoba izixuku ezincane zamazwekazi ezinjengeLaurentia, iSiberia ne-Australia bebezikhundleni ze-equatorial.
Njengoba kushiwo ngaphambili, le nkathi yaziwa njengokuhlukaniswa kwesikhathi lapho kwaba khona ukuqhuma okukhulu kwempilo kunanini ngaphambili. Kuyaziwa ngokuthi ukuqhuma kweCambrian. Lokhu kuqhuma kwaveza ukuvela kokuhlukahluka okumangalisayo kweplanethi obekubandakanya amaqembu amaningi ezilwane esizaziyo namuhla.
Phakathi kwalezi zilwane ezavelayo, sithola izingqinamba okuluhlobo lohlobo lomgogodla futhi ezibandakanya abantu. Akwaziwa ngokuqinisekile ukuthi kwenzeka kanjani inhlansi enjalo yokuqhuma kwezinto eziphilayo. Kukholakala ukuthi kungenzeka ukuthi kwakuyi-oxygen eyayikhona ngaleso sikhathi emkhathini nokuthi, ngenxa yokukhishwa yi-cyanobacteria ne-algae eyayenza i-photosynthesis, yayingafinyelela emazingeni adingekayo ukuze zonke izinto eziphilayo zikhule ngokwazo. izakhiwo eziyinkimbinkimbi ezinikeza izinhlobo ezahlukene zokuphila.
Esinye isici okufanele usicabangele imvelo eyenza kwaba nokwamukela izihambi kancane njengoba isimo sezulu sifudumala futhi nolwandle lukhuphuka. Ngale ndlela, izindawo zokuhlala zasolwandle ezingajulile zadalwa ezazilungele ukukhiqiza izinhlobo ezintsha zokuphila njengoba kunezakhamzimba eziningi.
Kodwa-ke, kucatshangwa ukuthi ososayensi abaningi benze ihaba ngobukhulu bokuqhuma kweCambrian ngenxa yokwanda kwezilwane ezinezakhiwo ezilukhuni ezatholwa kalula ngokushesha futhi kalula kunangaphambi kwazo. Njengakho konke lokhu ungaba namarekhodi ezinsalela kuncike esakhiweni somzimba. Uma umzimba uthambile awunakwenziwa ifossilized ngendlela efanayo. Isibonelo, okuningi kwaziwa ngama-brachiopods ayehlala kumagobolondo afana ne-clam- kanye ne-cockle-like nezinye izilwane ezinamathambo angaphandle abizwa namuhla njenge-arthropods.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi mayelana nesikhathi seCambrian.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Isikhathi seCambrian